Imbali ye-koumiss yaqala ngekhulu lesihlanu, xa amaSkitiya mandulo aqala ukusebenzisa ubisi olunomuncu, oluthola kubisi lwamatye. Leliphuzo elimhlophe elimhlophe liye lalinceda kakhulu kumntu. Kwavela ukuba izakhiwo zokutya kunye nokuphulukisa i-koumiss zihlukile. Okwangoku, bazama ukwenza i-koumiss kungekhona kuphela kubisi lwe-mare, kodwa nakubisi lweebhokhwe kunye neenkomo, nase-Asiya - ukusuka kubisi lwekamela.
Impembelelo yokwelapha emzimbeni womntu.
I-Koumiss isinconywa ukusela kunye nezifo ezahlukahlukeneyo. Kodwa, ungakhohlwa ukuba kukho imithetho ethile yokuthatha i-koumiss. I-Kumys iqulethe ipesenti enkulu ye-vitamin C, kwaye, kwisiphuzo esenziwe kubisi lwe-mare, kuninzi kuneenkomo koumiss. Kule nto, i-koumiss inconywa ukuba isetyenziswe kwizifo ezifuna ukuqinisa umzimba kunye nokuzikhusela-kubanda, ukukhulelwa ngamandla kunye nokukhathazeka, ukwenzela ukuthintela kwiintsholongwane zezifo eziphefumulayo kunye nezifo zokuphefumula.
I-Kumys ingasetyenziselwa ukonyango oluyinkimbinkimbi ekwenzeni unyango lwesifo sofuba (kwizigaba zokuqala neziphakathi). Ngokudibanisa nobusi, i-koumiss iphilisa isilonda se-duodenum nesisu.
Kwi-koumiss iqukethe i-lactic acid esebenzayo, evumela i-acidity kwi-gastritis, ivuselela i-pancreas, ikhulisa ukubunjwa kwe-bile, isantya sesisu. Oku kuncedisa ukwanda kwondlo kunye nenkqubo yokugaya inyama ngokubanzi.
I-Koumiss yintsholongwane yemvelo yesifo segazi, isifo sohudo, umkhuhlane we-typhoid.
Izigulane ezine-hemoglobin ephantsi egazini zingasebenzisa i-koumiss yokumisela kwayo.
Xa ukhathaza izifo zesifo, i-koumiss isetyenziswe njengesilwanyana.
Kwakhona, iipropati ze-koumiss zisetyenziselwa ukususa i-hangover ne-alcohol alcohol.
Ukusetyenziswa okubanzi kwe-koumiss efunyenwe ekudleni kwezigulane ezinezifo zentliziyo, i-oncology okanye izifo zesikhumba.
Emva kokungenelela kokuhlinzwa ngokulahlekelwa igazi okukhulu, okanye nge-dystrophy kunye nokunyanzelisa amanzi, i-koumiss kufuneka isetyenziswe kwisixa sama-1.5 litres ngelixa, ngelixa elinye, iiyure ezingama-0.5 emva kokutya.
I-Kumys iya kunceda nangona xa ubuyisela ububele bebele emva kokukhulelwa nokunyusa umntwana, ukuba uyayiphuza imihla ngemihla iikomityi ezi-2. Kukwacetyiswa kwakhona ukuba uphefle izilwanyana ezincinci kunye ne-koumiss ngokusebenzisa i-atomizer, uze udibanise italiti elithambileyo kwaye ungagcini iiyure eziyi-1-2. Ukususa i-toxicosis ngexesha lokukhulelwa i-koumiss kufuneka ithathe iipunipoli ezi-2 zonke ihafu zesixa.
Ndingakanani na ukuba ndiyidle i-koumiss ukuze ibe nempembelelo? Kucetyiswa ukuba uphuze le siselo ingenani iglasi eli-1 ngemini emva kwemizuzu engama-30 emva kwesidlo sakusihlwa.
Ngaba kunokwenzeka ukupheka i-koumiss ekhaya?
Makhe sijonge indlela i-koumiss ijika ngayo.
Emva kokuzalwa kwe-foal, amantombazana amancinci anika iithayitha ezimbini zobisi ngexesha ngalinye lokubamba iintsuku ezili-3-4 ngosuku. Iilitha ezimbini zobisi obumhlophe nolubhakabhaka ukusuka kwiyunithi nganye yokubamba idibanisa kwi-tank enkulu, kwaye ixutywe nembewu ethile. Kwakhona yongezwa yinkwenkwezi elungiselelwe kwioli yehashe epotyiweyo kunye ne-millet ebisiweyo.
Ngeteknoloji elungileyo, i-koumiss idinga ukulungelelanisa ize ilandelele iiyure ezisibhozo ukuya kwishumi. Kuyinto enqwenelekayo ukuba ukushisa okumnandi okwangoku akudluli kwi-degrees ezingama-30. Kule ndlela kuphela ufumana i-koumiss "ekhulileyo". Ekupheleni kokuvunywa, ukusela ubisi olunomuncu kuqhutyelwa ukuzalisa i-oksijeni kwimizuzu yeeyure kwaye igcinwa malunga neeyure ezisixhenxe.
Ubushushu be-kumys, obufanele ukusetyenziswa, bufanele bube bupholile, kodwa bungabanda, malunga nama-degrees angama-20. I-Kumys yokuguga obuthathaka (olunye usuku) luqulethe u-1% utywala, ukunyuka okuphakathi (iintsuku ezimbini) - 1.75%, kunye nokuguga okunamandla (iintsuku ezintathu) kunokuqulethe malunga no-5% kotywala.
Ngoko, i-koumiss ayilona nje ubisi kuphela, kodwa umveliso wobisi obonisiweyo olungiselelwe ngoncedo lwe-teknoloji ekhethekileyo yokuvumba.
Ekhaya, i-koumiss ingagcinwa kwifriji, kodwa ingabi ngaphezu kweentsuku ezintathu ukususela ekupheleni kokuvuthwa. Ukunyanga izifo, i-koumiss eqinile ayisetyenziswanga. Unxile, ngokuyisiseko, njengesiselo, unqunywe ukoma, kunokuba ubhiya.
Ukusetyenziswa kwe-koumiss kwi-cosmetology.
Ukuphulukisa iipropati zesiselo kuyenzeka ukuba uyisebenzise njengento yokucoca. Isiphumo esheshayo sokuvuselela ubuso kunye nentanyeni yentamo ifumaneka ngokuhlamba rhoqo ngokusela.
Okwangoku, unokuthenga i-koumiss ngesimo somgca owomileyo, ofanelekileyo ukuwenza isiselo kunye neempahla ezihlukahlukeneyo.
Ngosizo lwe-koumiss, unako ukulahla iindawo zokuguqula i-pigment, ukuba rhoqo kwaye usula ulusu ngesikhumba se-cotton esinywe kwisiselo.
Iimpawu zokuncedisa iinwele zincedo kakhulu. Kuba ukulungiselela i-koumiss ixutywe kunye ne-yolk yolk, isetyenziswe kwizinwele kwaye ixutywe kakuhle. Emva koko imele imizuzu engamashumi amabini uze uhlanza. I-koumiss engenamandla iyakususa iinwele - imela imizuzu emithathu uze uhlambulule. Le yindlela efanelekileyo yokunika iinwele ukukhanya nokuqinisa iingcambu zeenwele.
Ngethuba lethu, abantu basebenzisa izakhiwo ze-koumiss ezikhulayo. Njengamakhulu eminyaka edlulileyo, kunceda umntu alondoloze ubuhle aze aphilise kwizifo. Qiniseka ukuba uzame ukunambitha koumiss, kwaye mhlawumbi iya kuba ngumncedisi wakho ekugcineni nasekuqiniseni impilo.
I-pancreatitis enobuchule: unyango
Izindlela ezifanelekileyo zokuyeka ukutshaya
Indlela yokufundisa umntwana ukuba adlale ngokuzimela
Isaladi yePatato kunye nebhekoni
Ukuzivocavoca ngebhola: ibhola ye-fitball yabasetyhini
Ijusi le Cherry
Ukushisa okusemgangathweni ngexesha lokukhulelwa
Ikhukhi ezenziweyo kunye nesinamoni
Izinja ezidumileyo kwihlabathi